Porofoin’ny Tranonkala iray Miady Amin’ny Henatra Noho ny Toebatana Fa Natao #HoAnyRehetra #everyBODY ny Karnivaly (Fetibe) · Global Voices teny Malagasy
Tokony hisy fampiatiana sy fahamaroana ao anatin'ireo fetibe karaibiàna
Voadika ny 24 Marsa 2019 7:07 GMT
Nozarain'i NieKohle (@abundzukohle) tamin'ny 21 Martsa 2019 t@ 12:36pm PDT
Ny majikan'ny fandraisana anjara amin'ny Fankalazana Fetibe, tsy olana izay toerana misy azy ireo eto an-tany, dia ny fahafahana mitafy akanjo miavaka iray, manova ilay ianao ao ambadiky ny sarontava ary mifaly havanja tanteraka tsy misy teritery.
Any anatin'ny ankamaroanì'ireo Fetibe Karaibiàna, antsoina hoe “playing mas” (fanamarihan'ny mpandika lahatsoratra: filalaovana sarontava, eto ny ‘mas’ dia fanafohezana ny hoe mascarade) izy ity, saingy misy fitsipika tsy nolazaina mazava fa dia efa nipetraka ela milaza hoe omena tombondahiny manokana ny olona – indrindra fa ireo vehivavy- manana habe manokana sy rafi-batana miavaka. Ho an'ny Fetibe 2019 ao Trinidad sy Tobago, Candice Santana, izay sokajy mavesatra, dia nanapaka hevitra ny tsy hisaina zavatra hafa fa handray anjara amin'ny “playing mas”. Nahamenatra azy ny vatany noho io habeny io, saingy nitolona izy, ary niteraka resabe tety anaty tambajotra ny momba ilay olana. Nahazo fanohanana tsy tambo ho isaina i Santana ho setrin'ny herimpony sy ny hakantony.
Nadelle, mpankafy Fetibe ary mpanorina ny tranonkala #everyBODYplayahmas, natokana hanampy ireo olona rehetra manana toebatana isankarany mba hatoky ny tenany amin'ny fandraisana anjara amin'ireo fankalazàna Fetibe. Sary natolotra ampitiavana avy amin'ny Every Body Play Ah Mas.
Raha ny zavamisy, tamin'ny 2014 dia napetraka tety anaty tambajotra ho toy ny loharano fakàna torohay ny hetsika Karaibiàna manome lanjany ny vatana — #everyBODYplayahmas . Taorian'ny nivoahany tao anaty lahatsoratra iray miresaka ny Fetibe ao Trinidad sy ireo menatra noho ny haben'ny vatany, i Nadelle, sokajy mavesatra no sady mpankafy Fetibe rahateo, izay mpanorina ny tranonkala, dia nametraka ho tanjona hotontosainy ny “hanisy toerana iray azo antoka fa hahazoan'ny #VATANAtsirairay aina hilalao ny sarontavany”. Nanomboka teo, hoy izy, nitombo ny “#everyBODYplayahmas ka lasa hetsika fanentanana tanaty media sosialy izay nahatratra ireo fetibe karaibiàna rehetra nanerana ny tany.”
Ny fahalinana azon'i Candice Santana no nandrisika an'i Nadelle, izay nilaza hoe: “Marobe ireo vehivavy mino fa tsy mba afaka ny hitafy akanjo miavaka ary noho ireo mpanao sarontava toa an-dry Candice Santana sy ireo mpanjohy anay dia azonay atao ny mitondra hazavana iray hafa ho eo amin'izay tena fahitàna ny fanehoana marina sarontava.”
Ananan'ilay tranonkala ny lisitra feno amin'ireo Fetibe fanao isantaona ao amin'ny faritra, hatramin'ireo hetsika mifandraika aminy sy ireo fankalazana Fetibe ataon'ireo any am-pielezana.
Ny toerana tena ahazoan'ilay tranonkala fanohanana betsaka, anefa, dia ao anatin'ny faritra natao ho an'ny bilaogy, toerana izaràn'ireo vehivavy manana vatana vaventy ny tantaran-dry zareo sy ny sary Instagram:
Nozarain'ny everyBODYplayahmas (@everybodyplayahmas) t@ 22 Martsa , 2019 at 2:06pm PDT
Nozarain'ny everyBODYplayahmas (@everybodyplayahmas) t@ 21 Martsa 2019 at 11:17am PDT
Nozarain'i Monif Clarke (@monifclarke) tamin'ny 7 Aogositra 2017 at 10:51am PDT
Nzarain'i @rantothezebra tamin'ny 4 Aogositra 2018 at 6:34pm PDT
Nozarain'i Carnival Slayers™ (@carnivalslayers) t@22 Martsa 2019 at 9:03am PDT
Nozarain'i Carnival Slayers™ (@carnivalslayers) t@22 Martsa 2019 at 10:43am PDT
Nozarain'i Carnival Slayers™ (@carnivalslayers) t@ 22 Martsa 2019 at 4:23am PDT